“ပိုးတွေ့ရှိသူ ဒေါက်တာအတွက် ပြန်လည်ကျန်းမာကာ အမြန်ဆုံး အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ တင်ဇာမော်” - Cele Connections
“ပိုးတွေ့ရှိသူ ဒေါက်တာအတွက် ပြန်လည်ကျန်းမာကာ အမြန်ဆုံး အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးလာတဲ့ တင်ဇာမော်”
နာမည်ကြီး အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တင်ဇာမော်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်…။ တင်ဇာမော်ကတော့ အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲထိရောက်အောင် သီဆိုနိုင်တဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဂီတမျိုးဆက်သစ်တွေကို စင်တင်ပေးနေတဲ့ တီဗီပရိုဂရမ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Myanmar Idol” သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ရဲ့ ဒိုင်လူကြီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်..။
တင်ဇာမော်က လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကြောင့် ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့လေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လေ့ရှိသူပါ..။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၁၂)ရက်နေ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာတော့ တင်ဇာမော်က ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သူတွေကို ကုပေးရင်းကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်အတွက် သူမပြုတဲ့ ကုသိုလ်လေးတွေနဲ့အတူ ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးကို “အန်တီဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ရှင့်…. သမီးပြုသမျှ ကုသိုလ်တွေ နဲ့ သစ္စာပြုပြီး ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်နော်။ ပိန်းကြာရွက်ပေါ်ရေမတင်သကဲ့သို့ လန်းဆန်းကျန်းမာ ဦးမော့ရင်ကော့ပြီး အိမ်ကိုအမြန်ဆုံး ပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ နှစ်သစ် အကြို ဆုတောင်းနဲ့ အတူ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ အားလုံး ကပ်ဘေးမှ ရှောင်ကွင်း လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ (၂၀၂၀) ဧပြီ (၁၂) အိမ်တွင်းသင်္ကြန် အကြို..” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
တင်ဇာမော်ကတော့ သူမပြုခဲ့တဲ့ အလှူတွေကြောင့် ပိုးကုခံလိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာ အမြန်ဆုံးသက်သာကာ အိမ်ကို ပြန်နိုင်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းစကားဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုးကုခံရတဲ့ ဒေါက်တာအတွက် တင်ဇာမော်လို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်သက်သာစေဖို့ ဆုတောင်းစကားလေးတွေ ပြောပေးခဲ့ပါဦးနော်..။
Source: Tin Zar Maw’s Facebook
“ပိုးတှရှေိ့သူ ဒေါကျတာအတှကျ ပွနျလညျကနျြးမာကာ အမွနျဆုံး အိမျပွနျနိုငျဖို့အတှကျ ဆုတောငျးပေးလာတဲ့ တငျဇာမျော”
နာမညျကွီး အဆိုတျော တဈဦးဖွဈတဲ့ တငျဇာမျောကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော…။ တငျဇာမျောကတော့ အသံအားကောငျးကောငျးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲထိရောကျအောငျ သီဆိုနိုငျတဲ့ နာမညျကွီး အဆိုတျောတဈဦးဖွဈပွီး ဂီတမြိုးဆကျသဈတှကေို စငျတငျပေးနတေဲ့ တီဗီပရိုဂရမျအစီအစဉျတဈခုဖွဈတဲ့ “Myanmar Idol” သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲအစီအစဉျရဲ့ ဒိုငျလူကွီးတဈဦးလညျး ဖွဈပါသေးတယျ..။
တငျဇာမျောက လကျရှိ ဖွဈပကျြနတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈရောဂါပိုးကွောငျ့ ခံစားရတဲ့ ခံစားခကျြတဈခြို့လေးတှကေို သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလရှေိ့သူပါ..။ ဒီနေ့ ဧပွီလ (၁၂)ရကျနေ့ သင်ျကွနျအကွိုနမှေ့ာတော့ တငျဇာမျောက ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သူတှကေို ကုပေးရငျးကူးစကျခံလိုကျရတဲ့ ဒေါကျတာ ဒျေါမွငျ့မွငျ့စိနျအတှကျ သူမပွုတဲ့ ကုသိုလျလေးတှနေဲ့အတူ ဆုတောငျးပေးခဲ့တဲ့ အကွောငျးလေးကို “အနျတီဒေါကျတာဒျေါမွငျ့မွငျ့စိနျရှငျ့…. သမီးပွုသမြှ ကုသိုလျတှေ နဲ့ သစ်စာပွုပွီး ဆုတောငျးပေးနပေါတယျနျော။ ပိနျးကွာရှကျပျေါရမေတငျသကဲ့သို့ လနျးဆနျးကနျြးမာ ဦးမော့ရငျကော့ပွီး အိမျကိုအမွနျဆုံး ပွနျလာနိုငျပါစလေို့ နှဈသဈ အကွို ဆုတောငျးနဲ့ အတူ ကမ်ဘာသူ ကမ်ဘာသားမြား အားလုံး ကပျဘေးမှ ရှောငျကှငျး လှတျမွောကျနိုငျကွပါစေ။ (၂၀၂၀) ဧပွီ (၁၂) အိမျတှငျးသင်ျကွနျ အကွို..” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
တငျဇာမျောကတော့ သူမပွုခဲ့တဲ့ အလှူတှကွေောငျ့ ပိုးကုခံလိုကျရတဲ့ ဒေါကျတာ အမွနျဆုံးသကျသာကာ အိမျကို ပွနျနိုငျဖို့အတှကျ ဆုတောငျးစကားဆိုလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော..ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ပိုးကုခံရတဲ့ ဒေါကျတာအတှကျ တငျဇာမျောလို အမွနျဆုံး ပွနျလညျသကျသာစဖေို့ ဆုတောငျးစကားလေးတှေ ပွောပေးခဲ့ပါဦးနျော..။
(၇)ရက်တာ တရားအားထုတ်ပြီးနောက် ဒုလ္လဘရဟန်းအဖြစ်မှ လူဝတ်အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ကူးပြောင်းခဲ့ပြီဆိုတဲ့ မင်းသန့်မောင်မောင်
” အမဖြစ်သူ နေခြည်ဦးလို ဝိတ်ချတော့မယ့်အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ စိမ်းလဲ့ရတနာ”
မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ မိခင်